စနစ်သည် An-24RV FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 13.5 ကို MB
downloads ရယူရန္7467
Author: Dimitri Samborski, နီကိုလိုင် Samsonov, Maksim Mysin, (suite ကို fichier readme)
ဒါဟာရုရှားစနစ်သည် An-24RV ပြည့်စုံလေယာဉ်များဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ panel ကိုလက်တွေ့ကျကျဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ရုရှား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရဲ့! သငျသညျ Cyrillic စာမဖတ်ကြဘူးလာသောအခါမလွယ်ကူပါဘူး။ အဆိုပါယာဉ်နှင့်လေယာဉ်အပြည့်အဝ 3D ဖြစ်ကြသည်။ Repaints အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုကြရသည်။
သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ သိ. စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်သောလှပသောပုံတူ။